Akụkọ - Mgbanwe oge na oghere dị ebube karịa! E wepụtara akụkọ ngosi Hotelex Shanghai Post 2021! Ndị ngosi na ndị na -ege ntị maara nke ọma!
Mgbanwe oge na ohere dị ebube karịa! E wepụtara akụkọ ngosi Hotelex Shanghai Post 2021! Ndị ngosi na ndị na -ege ntị maara nke ọma!
Site na Machị 29 ruo Eprel 1st, 2021, 30th Shanghai International Hotel na Expo nri ka emere nke ọma na Shanghai Puxi Hongqiao National Convention and Exhibition Center.
N'otu oge ahụ, ihe ngosi a bụkwa otu n'ime ọrụ kaadị azụmaahịa atọ nke ụlọ ọrụ obodo na njem obodo nke Shanghai na -akwado n'oge "atụmatụ afọ nke iri na anọ" - akụkụ dị mkpa nke ngosi ngosi njem nlegharị anya mbụ nke Shanghai, nke mepụtara ihe ọhụrụ. na akụkọ ihe mere eme nke ngosi ihe oriri nwere ọnụ ọgụgụ square mita 400000
Afọ iri atọ nke onye nhazi nke nchịkọta miri emi n'ọhịa ụlọ oriri na ọ catụ andụ na nkwado na nkwado ya na ndị mmekọ na -egosipụta nke ọma n'ihe ngosi a. Dị ka ụlọ nkwari akụ mbụ na ihe ngosi nri na ụlọ ọrụ na oge opupu ihe ubi nke 2021, ihe ngosi a esetịpụla ndekọ ọhụrụ na usoro nke ihe ngosi na nkewa nke ebe ngosi, ọnụọgụ / ogo / nyocha nke ndị na -eme ihe ngosi na ndị ọbịa, ihe omume, nzukọ na nnọkọ, yana mmetụta ngosipụta n'ezie, na -egosi akụkụ na -eju afọ, nke doro anya kpaliri ntụkwasị obi nke ụlọ ọrụ na ahịa niile.
Hotelex Shanghai agwakọtala ihe karịrị akụkọ 300 site na mgbasa ozi bụ isi (akwụkwọ akụkọ, vidiyo, wdg) yana ihe karịrị akụkọ 7000 sitere na mgbasa ozi ọhụrụ (webụsaịtị, ndị ahịa, nzukọ, blọọgụ, microblogs, wechat, wdg)! Site na ederede, onyonyo, vidiyo na mgbasa ozi na-ebi ndụ, mgbasa ozi na ngosipụta gburugburu na akụkụ dị iche iche arụwo ọrụ dị mma n'ịkwalite ika na ngosi ngwaahịa nke ndị na-egosi ihe, yana nkwalite ewu ewu.
Ihe ngosi ahụ natara ndị ọbịa ọkachamara 211962 na mkparịta ụka azụmaahịa, mmụba nke 33% karịa 2019. N'ime ha, enwere ndị ọbịa 2717 si mba ofesi na mpaghara 103.
Ọnụ ọgụgụ ndị na -egosi ihe ngosi bụ 2875, mmụba dị ukwuu nke 12% karịa 2019, ọkwa ọhụrụ. Ihe ngosi ndị a na saịtị ihe ngosi ahụ sitere na mba na mpaghara 116 n'akụkụ ụwa niile. Ụlọ oriri na nkwari akụ na ụlọ oriri na ọ homeụ atụ n'ụlọ na ná mba ọzọ na -ekpuchi akụkụ niile. Ha wetara ngwaahịa ọhụrụ ha, gụnyere akpa tii ọka PLA, PETC / PETD / nylon / akpa triangle na-enweghị akwa ， dọtara ọtụtụ ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ileta.